NoirShares စျေး - အွန်လိုင်း NRS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို NoirShares (NRS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ NoirShares (NRS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ NoirShares ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ NoirShares တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
NoirShares များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NoirSharesNRS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.63NoirSharesNRS သို့ ယူရိုEUR€0.531NoirSharesNRS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.479NoirSharesNRS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.574NoirSharesNRS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr5.65NoirSharesNRS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.3.95NoirSharesNRS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč13.96NoirSharesNRS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł2.34NoirSharesNRS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.837NoirSharesNRS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.871NoirSharesNRS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$14.1NoirSharesNRS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$4.88NoirSharesNRS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$3.37NoirSharesNRS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹47.24NoirSharesNRS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.106.27NoirSharesNRS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.863NoirSharesNRS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.944NoirSharesNRS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿19.6NoirSharesNRS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥4.38NoirSharesNRS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥66.53NoirSharesNRS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩746.45NoirSharesNRS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦239.76NoirSharesNRS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽46.27NoirSharesNRS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴17.46
NoirSharesNRS သို့ BitcoinBTC0.00005 NoirSharesNRS သို့ EthereumETH0.00158 NoirSharesNRS သို့ LitecoinLTC0.0105 NoirSharesNRS သို့ DigitalCashDASH0.00617 NoirSharesNRS သို့ MoneroXMR0.0067 NoirSharesNRS သို့ NxtNXT44.52 NoirSharesNRS သို့ Ethereum ClassicETC0.0876 NoirSharesNRS သို့ DogecoinDOGE175.52 NoirSharesNRS သို့ ZCashZEC0.00638 NoirSharesNRS သို့ BitsharesBTS23.98 NoirSharesNRS သို့ DigiByteDGB23.03 NoirSharesNRS သို့ RippleXRP2.04 NoirSharesNRS သို့ BitcoinDarkBTCD0.0211 NoirSharesNRS သို့ PeerCoinPPC2.17 NoirSharesNRS သို့ CraigsCoinCRAIG278.72 NoirSharesNRS သို့ BitstakeXBS26.11 NoirSharesNRS သို့ PayCoinXPY10.68 NoirSharesNRS သို့ ProsperCoinPRC76.79 NoirSharesNRS သို့ YbCoinYBC0.000329 NoirSharesNRS သို့ DarkKushDANK196.14 NoirSharesNRS သို့ GiveCoinGIVE1324.01 NoirSharesNRS သို့ KoboCoinKOBO137.53 NoirSharesNRS သို့ DarkTokenDT0.58 NoirSharesNRS သို့ CETUS CoinCETI1766.2
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 06 Aug 2020 19:15:02 +0000.